Indonesia in Focus: Ise siga a na-egbu ọtụtụ nde mmadụ
Emechaghi Journey (380)
(Part narị atọ na iri asatọ), Depok, West Java, Indonesia, October 13, 2015, 8:37 pm)
Text Line Metro TV 10 November 2015 na akọ na, na 2030, e nwere ndị abụọ na nde Chinese ndị na-anwụ kwa afọ n'ihi-aṅụ sịga na-emebi àgwà (anwụrụ ọkụ siga). N'otu oge Indonesian mba onwe telivishọn ọha mmadụ ozi ugbu a kpọsaanụ Indonesia si Health Ministry egosi e nwere ihe ndị na-anwụ akpịrị cancer mere ụtọ nke ise siga, na-echetara ọha na eze ghara ịbụ ọzọ aja.
Nsogbu nke ụtaba iri mmadụ ahụ, na-eme nsogbu ahụ ike n'ihi na ndị mmadụ aghọwo ugbu a a global nsogbu, ọ bụghị dị nnọọ nsogbu na ok bi dị ka China, Indonesia, India, na ọtụtụ mba ndị dara ogbenye na ụwa dị ka Bangladesh, ma-kụrụ mba ndị mepere emepe na Europe na n'akụkụ ndị ọzọ nke Afrika, ikesiike elu Obodo ụkpụrụ, ọtụtụ mba machibidoro ụtaba mgbasa ozi na media dị ka telivishọn, ọbụna na-achọ anatara chepụta ahụ ike mmetụta nke ise siga na sịga nkwakọ, nakwa dị ka mkpuchi merperluas na-abụghị na-ese anwụrụ, dị ka ọha iga, ndị ọzọ eferife. N'agbanyeghị nke ahụ, ọnụ ọgụgụ nke ụtaba riri ahụ na-amụba na ọnụ ọgụgụ nke ọnwụ mere site ise siga nwekwara ụba. Ọ bụghị nanị na ndị ọchịchị na ndị òtù nzuko omeiwu na-eme ka iwu warara ohere maka mmepe nke ụtaba ụlọ ọrụ, kamakwa ndị ndú okpukpe nyere a fatwa (okpukpe iwu), dị ka Muhammadiyah na Indonesia dabeere na akpu Al na ọrụ ma Sunnah na nkà mmụta sayensị na-egosi inye a fatwa na ise siga bụ haraam. The otu àgwà ahụ kwukwara na ndị a ma ama ndị ọkà mmụta nke Saudi Arabia, Egypt, Pakistan na ọtụtụ ndị ọzọ ndị ọkà mmụta. Ọbụna ma ọ bụrụ na-ege ntị nke Radio na Television Rodja na-arịọ na ha na-eme tauziahnya Ustad (okwu) Ha niile ga-zara aṅụ sịga haram dabeere na akpu Al Quran, Sunnah na ọkà mmụta na ha ịchịkwa. Ustad Abu Yahya Badrussalam, Lc, ndị ọkachamara na hadith (ọdịnala) akwụkwọ na mahadum Islam na Madinah, Saudi Arabia melontakkan ise siga bụ haraam. Dị ka ya, dabere na esemokwu nke Koran na-Sunnah, na ndị ọkà mmụta sayensị na-egosi nke ise siga na udi nke igbu onwe ya, n'ihi na imebi ahụ ike nke na-ese siga, nke bụ nwayọọ nwayọọ pụrụ ịkpata ọnwụ. Ọ bụ ya mere, kwuru, sị Abu Yahya,-aṅụ sịga na udi nke omume nnupụisi, nke bụ ballast igwe mmehie na ndụ mgbe a nwụsịrị. M nwere ahụrụ anya ahụmahụ, m nwere enyi, bụ ohiha Ugboro ekpere na otu ụlọ alakụba, na mgbe ekpere mgbe eje ije n'ụlọ, ọ gwara m, na kemgbe m bụ nwata afọ ọ hụrụ n'anya na-aṅụ sịga. Site afọ ezumike nká kemgbe ugboro abụọ Mr. uzo ịwa obi, ọ tara ahụhụ a nkụchi obi ruru ka ịṅụ sịga bụ afọ ole na ole gara aga, o butere ụbụrụ cancer na a ga-ejikwara na ụbụrụ ya, na ama were ọtụtụ ọnwa, na a abụọ ogbo ụbụrụ cancer ịwa ahụ ndụ ya enweghị ike-azọpụta. Nwanne m nta nọmba ise (nke 10 ụmụnne) Bambang Widodo nwụrụ na 2006 mgbe ata ahụhụ site na ọrịa cancer akpa ume mesoo na Pasar Rebo Hospital. Jakarta Timur, ọ junkie arọ
Na 2030 China 3.5 Nde / Year Gburu sịga Ugbu na China, ihe 1.2 nde mmadụ kwa afọ na-anwụ anwụ n'ihi na okwu ndị metụtara ihe na-aṅụ sịga fọrọ nke nta 9.500 ndị nwụrụ kwa afọ n'ihi mmetọ ikuku na London Hidayatullah.com-A ọhụrụ akụkọ na-ebu amụma na ise siga na ga-egbu 3.5 nde mmadụ a afọ na China na abụọ gara aga ọtụtụ iri afọ. Akụkọ e mere site Chinese na mba ọkachamara na wepụtara Thursday, dị nnọọ ụbọchị tupu ụbọchị setịpụrụ World Health Organisation for China tie iwu megide ise siga nọ n'ime ke eferife. Ọ gaghị ekwe omume n'ihi na China izute ụbọchị nke Sunday, otu n'ime ọtụtụ ọnọdụ amanye mgbe China ama ọbọ dị ka onye so na WHO afọ ise gara aga. Amụma 2030 tụnyere na ugbu a ọnụ ọgụgụ nke ihe 1.2 nde mmadụ kwa afọ na-anwụ anwụ n'ihi na okwu ndị metụtara ihe ise siga. Akụkọ na-ekwu na 2030, ise siga ga-eme ka banyere pasent 25 nke niile ọnwụ, jiri ya tụnyere n'etiti 2 na nke 3 percent ndị nwụrụ nke AIDS. [Voan / hidayatullah.com] puku na-anwụ Site-aṅụ sịga na Indonesia REPUBLIKA.CO.ID, Jakarta - Ndị òtù nke Monitoring Ad Hendriyani aṅụ sịga gburugburu akwụkwọ, kwuru, sị, banyere 200 puku ndị mmadụ na Indonesia nwụrụ nke ọrịa mere site ise siga. Hendriyani kwuru, sị, Indonesia bụ mba nke atọ ọnụ ọgụgụ kasị elu nke nọ n'ọrụ na-ese siga na ụwa. Ọ na-eme atụmatụ na e nwere 66 nde nọ n'ọrụ na-ese siga na Indonesia, na 3.9 nde n'ime ha bụ ụmụ afọ 10 na afọ 14. Pasent nke nwoke na-ese siga bụ 67,4 percent. N'ihi na-ese siga na mba bụ elu ọnụ ọgụgụ ụtaba na-ese siga bụ ndị gburu Ọtụtụ. "Kwa afọ banyere 200 puku ndị mmadụ na Indonesia nwụrụ nke ọrịa mere site ise siga," ka o kwuru n'oge Press Conference na nkenye ọnọdụ Monitoring Siga Mgbasa ozi Around ụlọ akwụkwọ na obodo ise, na Jakarta, Monday (15/6). Eleezie, njupụta nke-aṅụ sịga na Indonesia bụ nke kachasi elu n'ime Ndịda Ọwụwa Anyanwụ Eshia. Nkezi ndị Indonesia anwụrụ ọkụ nke 12,4 sịga kwa ụbọchị. Ka ọ dịgodị, Indonesian Child ejegharị Lisda Sundari data anakọtara site Òtù Ahụ Ike Ụwa Òtù nke United Nations Organization (WHO) na-ekwu na iji ụtaba gburu 100 nde mmadụ nọ na narị afọ nke 20. Ọ bụrụ na a ewekọrọsịkwa-anọgide na, ụtaba ga-egbu otu ijeri mmadụ na narị afọ nke 21 ga-pasent 80 nke ọnwụ erukwa mba na emepe emepe. WASHINGTON, (AFP) .- The ụtaba ụlọ ọrụ iji nweta US $ 7,000 nke ọ bụla n'ime ihe karịrị nde mmadụ isii na-anwụ kwa afọ site na-aṅụ sịga metụtara ọrịa, dị ka ahụ ike onwe ìgwè World Nkuume Foundation (WLF). Afọ gara aga, ihe karịrị 5.8 puku ijeri sịga iwesa, yiri 2013, n'ihi na nke mụbara ụtaba ojiji na China dechapụ na ojuju na mba ndị ọzọ, dị ka otu akụkọ edu WLF. Na a global akụkọ Ụtaba Atlas, na WLF na American Cancer Society na-ekwu na na 2013, afọ ikpeazụ na dị data, uru nke ụtaba ụlọ ọrụ ruru ihe karịrị $ 44 ijeri. Ka ọ dịgodị, 6.3 nde mmadụ nwụrụ ise siga metụtara ọrịa, Ẹkot a uru nke $ 7,000 maka onye ọ bụla ọnwụ mere site ụtaba. The akụkọ na-ekwu na ọ bụrụ na ọnọdụ dị ugbu a anọgide na, a ijeri mmadụ ga-anwụ n'ihi na ise siga na n'ebe ụtaba a na narị afọ. Na mgbakwunye na-eme ọrịa cancer akpa ume, nke bụ mgbe egbu egbu, ụtaba ojiji bụ na-eduga n'ihe ize ndụ na-akpata a usoro nke ọrịa ndị ọzọ. Nke a bụ isi ihe mere na n'ezie na-apụghị izere ezere na ụwa nke nnwụchu ọnwụ si-adịghị ala ala na ọnọdụ, dị ka ọrịa obi, ọrịa strok na ọbara mgbali elu. Ọtụtụ mba gburugburu ụwa na ulo oru mgbochi ụtaba iwu, Otú ọ dị Ụtaba Atlas chọpụtara na nanị pasent 10 nke ụwa bi na-agụnye a keukwu mmachibido iwu na mgbasa ozi, nkwalite na nkwado nke ụtaba, na na 16 pasent nke debeere ndị na-abụghị aṅụ sịga ofụri. (Voa) Bụrụ maara nke uche gị na ebere nke na-ese siga, n'ihi na ise siga nwere ike ime ka pencandunya ga-ata ahụhụ ma na ụwa a na ndụ?
China adọ aka ná ntị US n'elu South China Oké Osimiri
SelatanImage China Oké Osimiri copyrightReuters
Agbapụtawo àgwàetiti ahụ South China Oké Osimiri dị ka isi iyi nke mpaghara erughị ala.
China dọrọ aka ná ntị United States na Friday, October 9, iji ụgbọ mmiri nso ka agwaetiti na South China Oké Osimiri nke ha na-ekwu ọbụbụeze.
Dị iche iche media kọrọ na US Navy na-enyocha ihe idokwa ụgbọ ihe na wuru àgwàetiti ahụ South China Oké Osimiri.
The ụgbọ mmiri a na ndokwa tinye n'ókèala 12 amụ kilomita ekwu site Beijing dị ka ha territorial mmiri.
Na aziza a nkwadebe, ndị mba ọzọ ozi ọma ọnụ na-ekwuru na Beijing kwuru agaghị ekwe ka mba ọ bụla inwere site ya territorial mmiri.
Reuters News Agency, ozi ọnụ na-ekwuru, sị, "Anyị na-echetara niile ọzọ nchegbu ọ bụghị na-akpali agụụ mmekọahụ nzọụkwụ na ezi obi na-na-a ọrụ àgwà kwupụta mpaghara udo ma kwụsie ike."
The US na allies, gụnyere Japan, na-akpọ maka Beijing kwụsị ewu nke wuru agwaetiti na South China oké osimiri, nke bụ ihe bụ isi okwu nke na ịrị elu na esemokwu n'etiti Beijing na Washington ala.
Ọ bụ ezie na President Iri na Otu Jinping kwuru na e nweghị ebumnuche nke jikeere agwaetiti ahụ, onye na nyocha na Washington na US ọchịchị kwuru China wuru agha ụlọ ọrụ n'ebe ahụ.
Beijing ekwusi ikike na South China Oké Osimiri reclamation
Ọkụ Coral Island CrossImage copyrightReuters CSIS AMTI
China wuo a atọ runway na-acha Ọkụ Ọkụ Cross Reef Island, na South China Oké Osimiri.
The Chinese ọchịchị kwuputakwara ozo nri ha iji naputa disputed ebe ke South China Oké Osimiri.
Chinese Minista mba Wang Yi, kwuru, sị ngo bụ mkpa ịnọgide, n'agbanyeghị ikpeazụ nke ọnwa na Beijing kwụsịrị reclamation.
"Ndị a dị mkpa oru ngo anyị na-arụ ọrụ na anyị onwe anyị agwaetiti na South China Oké Osimiri. Anyị na-adịghị eme ka ọ bụla ná mba ndị ọzọ dị ka zaa," wee sị Wang Yi.
"Ha na-aduak iji melite ogo nke ndụ nke agha guzo n'ebe ahụ nakwa ịhụ mmezu nke ibu ọrụ dị ka ndị kasị ibu mba na mpaghara," O kwukwara.
Satellite photos iwere na nso nso gosiri ewu ọrụ ewu a atọ runway na-acha Ọkụ Ọkụ Cross Reef Island Reef.
Na-adịbeghị anya na oge Chinese ọchịchị na-ewu runways na nkwurịta okwu na ụlọ ọrụ na agwaetiti na South China Sea, bụ nke e kwenyere ga-eji site Chinese agha.
President nke China, nke Iri na Otu Jinping, ga-gaa US na-esonụ n'izu na Chinese na-ekwu na South China Oké Osimiri yiri ka-atụle mgbe o zutere na agadi ọchịchị na Washington.